#WithSyria (Miaraka amin’i Siria) mba hitsahatra ny fandarohana baomba an-jambany ny sivily siriàna · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Janoary 2020 16:54 GMT
Vakio amin'ny teny Español, русский, Français, Português, عربي, বাংলা, 繁體中文, 简体中文, English
Ahoana no hiheverana fa handry fahalemana eto? Mihetseha dieny izao mba hitsahatra ny fandarohana baomba ireo sekoly, hôpitaly ary trano fonenana. Loharano: withSyria.com
[Raha tsy misy fanamarihana manokana, dia mitondra ho amin'ny lahatsoratra anglisy ny rohy rehetra.]
“Isanandro vaky ny daroka baomba ao Siria. Avy amin'ny lafy rehetra izy ireny, ary mahavoa sekoly, hôpitaly ary faritra fonenana. Tamin'ny volana Febroary, nangatahan'ny Filankevi-pilaminan'ny Firenena Mikambana ny hampitsaharana ireo fanafihana an-jambany atao amin'i Siria, ary nanome toky izy ny hanao hetsika raha toa ireny fanafihana ireny ka mitohy. Vao mainka niharatsy ny herisetra, noho izany, ampiasao ny fahefana anananareo amin'ny Filankevi-pilaminan'ny Firenena Mikambana mba hitazonan'izy ireo ny teny nomeny.”
Io no hafatra aelin'ny withSyria, hetsika iray iarahan'ireo fikambanana maherin'ny 130, vondron'ireo Siriàna any ampielezana ar y ireo olona erantany tsy mitanila fijery, nefa miray hina amin'ireo voafonjan'io fifandonana efa naharitra 4 taona amin'izao fotoana izao io.
Fanirian'ny #withSyria ny hihainoan'ireo mpitarika erantany azy ary hanentana azy ireo hihetsika, tamin'ilay Fivoriambe faha-69 nataon'ny Firenena Mikambana [fr], izay nanomboka tao New York tamin'ny 24 Septambra 2014. Leila Zerrougui, Solontena Manokan'ny Sekretera Jeneralin'ny Firenena Mikambana misahana ny Ankizy sy ny Fifandonana mitam-piadiana, no miresaka momba an'i Siria toy ny hoe “iray amin'ny toerana faran'izay mampididoza indrindra ho an'ny ankizy”. Voasokajy ihany koa i Siria ho ao anatin'ireo faritra tena mampididoza indrindra tsy azo iainana amin'izao fotoana izao satria any anaty vohitra sasany any, lasa fenitra ny tifitra balafomanga:
Ho an'ireo sivily, ny toerana tena mampididoza indrindra dia ny tsena, ny hôpitaly ary ny sekoly izay manohy miasa mandrakariva ao anatin'ireo fepetra tsy azo iainana sy eo ambany fanahiana tsy mitsahatra hoe sao hiharan'ny fanafihana.
Tsy azo adinoina
Na teo aza ilay fangatahan'ny Filankevi-pilaminan'ny Firenena Mikambana, tamin'ny Febroary 2014 mba hampitsaharana ireo daroka baomba an-jambany, tsy mitsahatra ny mitondra fahafatesana ireo fandatsahana baomba isananadro ao Siria, ary mamono ireo tsy manantsiny hatraiza hatraiza. Ny fanentanana #withSyria dia nandefa lahatsary iray tao amin'ny YouTube, nitondra lohateny hoe “Dia miverina” ary mampiseho, tamin'ny famerenany nandefa, ny tantaran'ireo ankizy siriàna tsy manantsiny nilalao baolina kitra ary voan'ny daroka baomba an-jambany [Tandremo, sary mandratra fo].
Ilay lahatsary dia mifarana aminà rohy iray mitondra mankany amin'ny fanangonantsonia hangatahana tsy misy hatak'andro amin'ireo mpitarika erantany tonga nanatrika ny Fivoriamben'ny Firenena Mikambana mba hanao tsindry amin'ny Filankevi-pilaminan'ny Firenena Mikambana handraisany fepetra mivaingana mba hitsaharan'ireny daroka baomba an-jambany atao amin'i Siria ireny. Ny tanjona dia ny hahazoana sonia 100.000. Saingy heverin'ireo mpikarakara ilay fanangonantsonia fa arakaraky ny maha-betsaka ny sonia azo no hahamafy koa ny tsindry amin'ireo mpitondra erantany ary miaraka amin'izay ihany koa ny amin'ny Filankevi-pilaminan'ny Firenena Mikambana.
Tsara toerana tao amin'ny Twitter ny #WithSyria tamin'ity herinandro ity, sy tao amin'ny Facebook mba hahndresena lahatra ireo mpitondra erantany tsy handingana fotsiny ilay fotoana hahafahana mihetsika araka ny fanolorantenan-dry zareo.
Bitsiky ny #WithSyria
Raha tonga hatramin'ny faran'ity lahatsoratra ity ianao, dia ISAORANA MIALOHA sahady amin'ny anaran'ireo Siriàna rehetra, amin'ny anaran'ireo Siriàna mpialokaloka voatery nandositra ny trano fonenany sy mijery ny faharavàn'ny fireneny, ny famonoana ny vahoakany, amin'ny fanjavonan'ireo andiantaranaka hoavy any anaty toby any, any ambany sekoly voadaroka baomba ary miaraka amin'ireo fianakaviana afindra toerana. Tsy hoe satria lavitra anareo no mitranga izany dia hoe tsy misy.
Amin'ny alàlan'ny fihetsehana, tsy hoe fotsiny asehonareo fa manahy ianareo, fa manatevina laharana ireo mpikatroka an'aliny maro manerana izao tontolo izao ianareo, izay mikatsaka ny hanavotra aina sivily siriàna. Ho fanampiana anay, azonareo atao ny :
mandray anjara amin'ny fanentanana miaraka amin'ireo ONG miisa 130, mibitsika ny #WithSyria
mijery ilay lahatsary sy manao sonia ilay fanangonantsonia
mizara ilay lahatsary.
manefa imailaka amin'ireo olona mpifandray aminareo, ny namanareo, ny tambajotranareo mba hizaràn-dry zareo betsaka koa ny fanangonantsonia
azonareo ampiasaina ireo sary hita ato mba hanatsarànao ny bitsika alefanareo, noforonina ho an'ilay fanentanana izy ireo.